]Gịnị bụ ọrụ nke akwa? - ụlọ ọrụ Alice
Ndị na-emepụta ihe na-enye ọrụ OEM akara aha dị elu
Akara karama igwe
Akara akara Aluminium
Akara aha Zinc Alloy
Akara Nickel Electroformed
Ihe mmado omenala
Akara igwe anaghị agba nchara
Gịnị bụ ọrụ nke akwa? - ụlọ ọrụ Alice
Ọrụ nke akwa akwa bụ imeju ụra kwa ụbọchị nke ụmụ mmadụ, idekọ na nyochaa ịdị arọ, na imewe na-emekarị ka ọ nwee ọgụgụ isi.
Enwere ụdị akwa anọ na arịa ụlọ oge ochie, ya bụ ihe ndina, akwa Arhat, akwa mkpuchi, na akwa Babu. A na-eji abụọ nke ikpeazụ eme ihe naanị maka ụra; ebe abụọ mbụ nwere ọrụ nke ịnọ ọdụ na mgbakwunye ụra. Enwere ụdị ụra abụọ na Chinese oge ochie: nnukwu ụra na ụra. Nnukwu ụra pụtara ihi ụra abalị. Ụra na-ezo aka na ụra dị ka ezumike nri ehihie. A na-eji ihe ndina na akwa Arhat eme ihe na-ehi ụra ma nwee ike iji mee ka ndị ọbịa nwee obi ụtọ, ebe a na-eji akwa akwa na akwa akwa na-ehi ụra buru ibu. , Enweghị ike iji ọbịa ọbịa.
Tupu usoro eze Han, ụdị ndụ nke ndị China ga-anọdụ ala n'ala, ya mere etiti ndụ ga-adị n'akụkụ ebe ihi ụra, ọbịa na-adịkwa gburugburu ụlọ ihi ụra nke onye nwe ya. Ka oge na-aga, e guzobela ile ọbịa nke ndị China. Tupu usoro eze Qing, ọbụlagodi na mmalite afọ nke Republic of China, ọkwa kacha elu nke ile ọbịa ndị China na-anọkarị n'àkwà ma ọ bụ n'elu kang. Isi ọrụ nke ihe ndina na akwa Luohan abụghị ụra, kama ile ọbịa.
Site na nke a kwupụta: Ọdịnaya dị n'elu sitere na ịntanetị, yana ọdịnaya bụ naanị maka ntụaka gị. Ọ bụrụ na ị mebiri ikike gị, biko kpọtụrụ anyị, anyị ga-ehichapụ ya ozugbo.
Efere aha ahụ nwere ọtụtụ ngwa ngwa na enwere ike ịhụ ya n'ebe niile na ndụ, dị ka ọdịyo, ngwa ụlọ, friji, kọmputa, ngwaahịa nchekwa, wdg, nke enwere ike iji mee ihe maka akara. Na anyị na-eme ka aha maka afọ 21, na anyị nwere ụfọdụ ogo nke nka. Anyị (Alice) bụ ndị ọkachamara na-emepụta arịa ụlọ aha. Anyị nwere ike ịmepụta zinc alloy, aluminum, ọla kọpa, brass, pvc, wdg Ụlọ ọrụ ahụ nwere nyocha zuru oke na mmepe, imewe, mmepụta, ahịa, usoro ọrụ, ikike ụghalaahịa, ikike ikike 5 mba na ụghalaahịa, mpaghara osisi nke 2,000 square. mita, na ihe karịrị 100 ndị ọrụ.
Buru Gịnị bụ ogologo na obosara nke bed-Alice factory
Nchekwa matraasi-ụlọ ọrụ Alice OSOTE